Xiriir go'an oo lala yeesho Ilaah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Farxadda ugu dambeysa ee adeegga Kiristanka waxay ka kortaa xaqiiqda ah inaan si wanaagsan u sii baranno Masiixa. Waxaad u maleyn kartaa in taasi ay nooga muuqato sidii wadaaddada iyo hoggaamiyayaasha kiniisadda. Hagaag, waxaan jeclaan lahaa inay taasi ahayd. Aad bay noogu fududahay inaan u qabsanno howlaheena si joogto ah halkii aan ku salayn lahayn xiriir sii kordhaya oo lala yeesho Ciise Masiix. Xaqiiqdi, wasaaradaadu wax saameyn ah kuma yeelanayso ilaa aad xidhiidh qoto dheer la yeelatid ciise mooyee.
Filiboy 3,10 waxaan ka qornaa: Waxaan jeclaan lahaa inaan aqoonsado isaga iyo xoogga sarakiciddiisa iyo bulshada dhibaatadiisa, oo dhimashadiisuna sidii la mid ahayd. Ereyga gartu wuxuu muujiyaa xiriir dhow, oo caan ah oo ka dhexeeya nin iyo naag. Mid ka mid ah sababta Bawlos ugu farxay markii uu warqad u qorayay Filibiin xabsiga ka yimid wuxuu ahaa xiriirkiisa dhow, iyo xiriirka qotada dheer ee uu la leeyahay Masiixa.
Labadii usbuuc ee la soo dhaafay, waxaan idinkala wada hadlay labada dilaaliin farxadeed ee adeega Christian - sharci iyo mudnaanta khaldan. Xiriirka qallalan ee lala yeesho Masiixa sidoo kale wuxuu dili doonaa farxaddaada adeegga. Waxaan xasuustaa inaan hore u maqlay sheekada wiil sariirta ka soo dhacay. Hooyadiis waxay gashay qolka jiifka oo waxay tidhi: Tommy maxaa dhacay? Wuxuu yiri: Waxaan qiyaasayaa inaan kusii jeedo meesha aan sariirta ku jiifo.
Inbadan oo inaga mid ah, taasi waa dhibaatada ka jirta wasaaradda masiixiga. Waxaan soo galnay qoyska Ilaah, laakiin waxaan aad ugu dhowaannaa halka aan ku bilownay. Si qoto dheer uma sii socon doonna. Waxaan ku weynanay ruux ahaan si aan u ogaano Ilaah qoto dheer iyo shaqsi ahaanba. Miyaad jeceshahay inaad dib u hesho farxaddaada markay ahayd shaqada? Sii wad inaad ku korto xiriirka aad la leedahay Masiixa.
Maxaad sameyn kartaa si aad u sii wanaajiso xiriirka aad la leedahay Masiixa? Ma jiro wax qarsoon oo ku saabsan sida qof ka tirsan wasaaradda Masiixiyiintu uu Masiixa si fiican ugu barto. Waxay u koraan si la mid ah sida qof kasta oo kale.
Waqti ayaad ku qaadataa Ilaah. Ma waxaad waqti badan iyo waqti badan la qaadataa Ilaah? Markaan aad ugu mashquulsan nahay adeegga Masiixiyiinta, waxaan inta badan u oggolaannaa waqtigeenna inuu ku xanuunsado Ilaah. Waa inaan aad uga maseerno waqtigeenna Ilaah. U adeegidda Ilaah adiga oo aan wakhti ku filan la haysanin waa midho la’aan. Markaad wakhti badan la qaadato Masiixa, sida ugu fiican ee aad isaga ugu taqaanid isaga - isla markaana ay farxad aad u badan ku siiso adeeggaagu.
Si joogto ah ula hadal Ilaah. Si kastaba ha noqotee, waqti keliya kuma qaataan inay Ilaah la qaataan. Waxay xidhiidh wanaagsan la yeeshaan Ilaah iyagoo si joogto ah ulahadlaya isaga. Sidoo kale maaha wax ku saabsan boroodhiga ereyada mala-awaalka ah. Tukashadayda uma muuqato mid aad u ruuxi ah, laakiin waxaan la hadlaa Ilaah waqtiga oo dhan. Waxaan istaagi karaa haadka maqaayada cuntada lagu cunteeyo oo waxaan idhi: Ilaahow runtii waan ku faraxsanahay inaan cuno cuntadan fudud. Waan gaajoonayaa! Furaha ayaa ah: Sii wad inaad la hadasho Ilaah. Hadana ha ka xishoon faahfaahinta noloshaada salaadda - sida goorta, meesha iyo goorta aad tukanaysid. Markaa waxaad xiriirka ku beddelatay cibaado ama nidaam. Kuma raaxeysan doontid caadooyinkaas. Keliya xiriir sii kordhaya oo lala yeesho Ciise Masiix ayaa taas sameyn doona.
Qalbigaaga dhammaantii Ilaah ku aamin. Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan baranno inaan aaminno isaga. Tani badanaa waa sababta isaga u oggolaata dhibaatooyinka inay ku soo galaan nolosheena. Dhibaatooyinkaas, wuxuu muujin karaa isku hallayntiisa - tanina waxay kordhin doontaa kalsoonida aad isaga ku qabtid. Xiriirka aad la leedahay isaga ayaa ku kori doona hawsha. Eeg qaar ka mid ah halganka aad soo martay muddooyinkan dambe. Sidee buu Ilaah isku dayaa inuu kugu kalsoonaado isaga? Dhibaatooyinkaasi waxay albaab u noqon karaan xiriir aad u dhow oo Ilaah lala yeesho.
Bawlos wuxuu noogu sheegayaa Filiboy 3 waxa uu ahaa yoolkiisii ​​koowaad ee nolosha. Kama hadlayo abaalmarinta jannada, abaalmarinta kuwa kale, ama xitaa kaniisadaha aasaasay ama dadka u horseeday Masiixa. Wuxuu yiri: Ujeedka koowaad, yoolalka ugu muhiimsan nolosheyda waa inaan ogaado Masiixa. Wuxuu taas dhahayaa dhamaadka noloshiisa. Oo miyaanu Ilaah weli aqoon? Dabcan wuu garanayay isaga. Laakiin wuxuu doonayaa inuu si fiican isaga barto. Gaajada uu u qabo Eebbe waligeed ma joogsan. Isla sidaas ayaa na khuseeya annaga. Farxadeena adeegga Christian waa mid ku tiirsan.
Xiriir go'an oo lala yeesho Ilaah